Tsy mety afa-tsaona ny tontolon’ny kanto: nodimandry koa i Bivy, tarika Tsivery | NewsMada
Tsy mety afa-tsaona ny tontolon’ny kanto: nodimandry koa i Bivy, tarika Tsivery
Par Taratra sur 19/04/2021
Tao anatin’ny andro vitsy monja, efa ampolony ireo mpanakanto, ao amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina no namoy ny ainy. Fantatra fa lasa, omaly, koa i Bivy, ao amin’ny tarika Tsivery.
Mety ankavitsiana ireo tena mahalala azy… Tsy mba tia sehoseho loatra rahateo, kanefa dia nivangongoan’ny talenta raha i Bivy. Mpamoron-kira, mpihira, mpitendry zavamaneno, mpandrindra hira, mpitarika antoko mpihira, indrindra teknisianina amin’ny fandraisam-peo sy ny fandrindrana no tena nahafantarana azy. Nodimandry, omaly, tany Morondava Ramanankoraisina Charles Aimé, na i Bivy. Saika tsy nino ny ankamaroan’ireo namany, raha tsy nanamafy ny vaovao ratsy ireo tany an-toerana. Eny, lasa tokoa ilay fihantan’ny namany mpanakanto, indrindra ireo izay nandalo ny Studio Mars…
Nandany taona maro tao amin’ny Studio Mars tokoa i Bivy. Saika izy avokoa no nanao ny fandrindrana sy fandraisam-peon’ireo hiran’ny mpanakanto nandalo tao. Anisan’ireo nanangana ny Génération Mars i Bivy. Nanana ny tarika Tsivery, izay natsangany koa anefa izy, nalaza tamin’ireo hira to any “Hiran-jozy”, “Tsy hanambaly”, “Mitsakafiaky”, “Zazan’i Menabe”sns. Vitsy ihany koa no mahafantatra fa ny tarika Tsivery no nitondra voalohany ny kilalaky taty an-drenivohitra sy nampiditra zavamaneno maoderina tao anatin’ny gadona.
Ankoatra ny fiaraha-miasa tamin’ny mpanakanto maro, nanokana fotoana ho an’ny hira ara-pilazantsara ihany koa i Bivy. Namoron-kira ho an’ny antoko mpihira maro, na teto Antananarivo na tany Morondava izy. Rehefa nitsahatra ny Studio Mars, mbola niara-niasa tamina trano mpamokatra hafa i Bivy, ankoatra ny fanampiany ny mpanakanto, izay efa tsy afaka taminy.
Mitomany azy sy maneho ny alahelo noho ny fisarahana amin’i Bivy ireo namany ao anatin’ny tontolon’ny zavakanto. Maneho ny fiaraha-miory sy ny fankaherezana ny fianakaviana ihany koa izahay eto amin’ny gazety Taratra.